Voatsikera ho Manao “Fanavakavaham-bolonkoditra” Tamin’ny Fanasongadinana Tava Mainty ny Fahitalavi-Panjakana Shinoa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Marsa 2018 4:26 GMT
Nosoratan'i Jun Pang Ity lahatsoratra ity ary nivoaka voalohany tao amin'ny Hong Kong Free Press tamin'ny 17 Febroary 2018. Navoaka tato amin'ny Global Voice ity dika eto ambany ity noho ny fifanarahana misy.
Tsy ny rehetra no nahita ny tantara tsangana ho mpanavakavaka. Nilaza i Anthony Tao, tale mpanatanteraka ao amin'ny fampitam-baovao antserasera iray antsoina hoe SupChina fa tsy nokendrena hanohintohina iny, saingy “meloka amin'ny hakamoana na ny tsy fahalalana na mety ho izy roa mihitsy” ny mpanatontosa.
Heverina ho iray amin'ireo sehatra iray lehibe indrindra amin'ny famoahana propagandy politika ny Gala, ary mahasarika tsikera be dia be ihany koa izy io. Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, voasivana ao amin'ny sehatra media sosialy lehibe shinoa ny fanehoan-kevitra mitsikera ny votoatin'ny Gala. Nanakana ihany koa ny lisitry ny karoka mifandraika amin'ny Gala, toy ny “Fetin'ny Gala lohataona” + “Mampihomehy”, ary ny “Gala lohataona” + “fako” ihany koa ny tranonkalan'ny tambajotra sosialy malaza indrindra ao Shina Weibo tamin'ity taona ity.